मृगौला पीडित दुर्गादेविको अवस्था नाजुक , सामाजिक अभियान्ता तामाङ्ग लगायतले दिए ८२ हजार | रेडियो झापा 100.7 MHz.
मृगौला पीडित दुर्गादेविको अवस्था नाजुक , सामाजिक अभियान्ता तामाङ्ग लगायतले दिए ८२ हजार
रेडियो झापा 100.7 MHz. बुधबार, आश्विन २८, २०७७ १६:०१:१५
दमक / झापाको दमक ३ टुक्रेकी दुर्गादेवि बिश्वकर्मा दुबै मृगौला फेल भएर ओछ्यानमा थलिएकी छन् । उनले बिपी प्रतिस्ठान धरानमा नियमित डाईलेसिस गराउँदै आएकी छन् । सातामा दुई पटक डाईलेसिस गराउनुपर्ने तथा कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्ने भएकाले उनको मासिक ३० हजार खर्च लाग्छ ।
बिश्वकर्मा परिवारसँग भएको सबै सम्पती पनि दुर्गादेविको उपचारमा खर्च भईसकेको छ । उनिहरु अहिले ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन् । उनका श्रीमान् सामान्य ज्याला मजदुरी गर्छन् । कुखुरा हाँस पालेर सामान्य जिवन गुजारा गरे पनि दुर्गादेविको उपचारमा उनिहरुलाई सकस परेको छ ।
डाक्टरका अनुसार अब उनको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएको छ । दुर्गादेविका श्रीमान् रणबहादुर बिश्वकर्मा श्रीमतीको लागी मृगौला दिन तयार भए पनि प्रत्यारोपणमा लाग्ने खर्च उनिहरुसँग छैन । उनका श्रीमान् रणबहादुरले भने (मृगौला म दिन्छु तर मृगौला प्रत्यारोपणमा लाग्ने पैसा हामीसँग छैन । उनले आफ्नो श्रीमतीलाई बचाईदिन समाजसेवी तथा देशविदेशमा रहनु भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुमा अपिल गरेका छन् । दुर्गादेविले पनि आफुलाई बाच्ने रहर भएको तर आफुहरुसँग उपचार गर्ने पैसा नभएको भन्दै रुदै सबैसँग हारगुहार मागेकी छन् । मृगौला प्रत्यारोपणका लागी करिब ८ लाख खर्च हुने बताइएको छ ।
सामाजिक अभियान्ता सम्झना तामाङ्ग लगायतबाट ८२ हजार सहयोग
दुर्गादेविको दयनिय अवस्था देखेर सामाजिक अभियान्ता सम्झना तामाङ्ग लगायतबाट ८२ हजार सहयोग प्राप्त भएको श्रमान् रणबहादुरले बताए । दमकमा क्रियाशिल विभिन्न संघ संस्था लगायतको पहलमा रु ८२ हजार सहयोग गरेको समाजसेवि तथा सामाजिक अभियान्ता सम्झनाले बताइन् । सो रकम अशोज २१ गते बिपि प्रतिस्ठान धरानमा नै पुगेर प्रदान गरेको उनले जानकारी दिइन् ।